Archive du 20190912
Rado Ramparaoelina Hanatsara ny sehatry ny fanabeazana eny Ampitatafika
Tonga nanatitra ny taratasy filatsahan-kofidiany ho Ben’ny tanàna teny amin’ny OVEC 67 ha omaly Rado Ramparaoelina, kandida Ben’ny tanànan’Ampitatafika.
Fampandrosoana an’Ambohimanambola Vonona ny kandida Nantenaina atolotry ny TIM
Ramatoa Nantenaina Rahagarison dia ben’ny tanàna lefitra teo anivon’ny kaominina Ambohimanambola. Maro ireo asa fampandrosoana vitany ka nangataka ny hirotsahany ho ben’ny tanana ny vahoaka.
Fifidianana ben’ny tanàna Tsy rototra ny olona fa efa leon’ny hosoka
Ho tapitra anio ny fe-potoana handraisana ny antontan-taratasin’ireo kandida ben’ny tanàna sy mpanolotsaina kaominaly. 3 andro ny fotoana ananan’ny OVEC hanamarinana ny antontan-taratasy, ka ny 17 septambra ny CENI no hamoaka ny lisitr’ireo kandida.
Parlemantera TIM “Mila an-dRavalomanana Antananarivo”
Mila olona efa voasedra Antananarivo, mila raiamandreny Antananarivo, mila olona sahy, manana traikefa, mila olona manaporofo fa nahavita, mahavita ary mbola hahavita Antananarivo, hoy ny fanambaran’ireo parlemantera lany tamin’ny anaran’ny Antoko TIM omaly.
Fampandrosoana an’i Madagasikara Mila vehivavy sahy mijoro
Zava-dehibe loatra ny anjara birikin’ny vehivavy sy ny renim-pianakaviana amin’ny fanasoavana faritra na ny kaominina hatramin’ny firenena misy aza, hoy ny mpandraharaha sady filohan’ny fikambanana mpanao asa soa FFAM (Force Féminine d’Aide Mutuelle),
Dosie filatsahan-kofidiana ben’ny tanàna Hasarotina mba ho tombon’ny kandidam-panjakana
Mampikaikaika ireo kandida maro ny fikarakarana ny antontan-taratasy firotsahana ben’ny tanàna amin’izao.
Guy Maxime Ralaiseheno Vonona hitondra avo ny tanànan’Ankaraobato
Vonona hirotsaka hofidiana ho Ben’ny tanànan’Ankaraobao indray Atoa Guy Maxime Ralaiseheno amin’ny 27 novambra ho avy izao,
Tsy fahafehezana ny teknika fitehirizam-bokatra Vary 400.000 taonina isan-taona no very eto amintsika
Tena zava-dehibe ny fahaizan’ireo tantsaha mpamokatra mifehy ny teknika fitehirizam-bokatra mba tsy hahaverivery fahatany izany. Araka ny fanazavana azo omaly tetsy Ampefiloha, nandritra ilay atrikasa nokarakarain’ny “Forum Conseiller Agricole” na FCA izay natsangan’ny AFAAS eto Madagasikara dia mahatratra 400.000 taonina isan-taona